यस्तो छ यामाहाको ८ मोडलको मूल्य, तपाईको रोजाइमा कुन ?
8:44 am, बिहीबार, जेठ ८, २०७७
काठमाडौं । जापानीज मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी यामाहाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यूले रहेको छ । एमएडब्ल्यूले नेपाली बजारमा ४५ बर्षदेखि यामाहाको मोटरसाइकल बिक्र गर्दै आएको हो ।
हाल नेपाली बजारमा यामाहाको विभिन्न ८ मोडलका मोटरसाइकल तथा तीन मोडलका स्कुटर बिक्री गरिरहेको छ । यामाहाका मोटरसाइकल नेपाली बजारमा लोकप्रिय रहेका छन् । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय १५० सीसी तथा २५० सीसी सेग्मेन्टमा यामाहाले आफुलाई स्थापित गरिरहेको छ ।
कम्पनीले २ लाख मूल्यदेखि ९ लाख मूल्यसम्मका स्कुटर तथा मोटरसाइकल नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा यामाहा एफजेड सिरिज निकै चर्चित रहेको छ ।
यामाहाले बिक्री गर्ने विभिन्न ८ मोडलका मोटरसाइकलहरु
यामाहा आर-३ मा ३२१ सीसी, इनलाइन २ सिलिन्डर, लिक्विड कुल्ड, ४ स्ट्रोक, एफआई इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ९००० आरपीएममा २९.६ एनएम टर्क तथा १० हजार ७५० आरपीएममा ४२ पीएस पावर जेनेरेट गर्छ । यसमा ६ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ । यो मोटरसाइकलको मूल्य ९ लाख २४ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
२. आर १५ भी ३
नेपाली बजारमा लोकप्रिय रहेको रहेको यामाहा आर १५ भी ३ मा १५५ सीसी लिक्विड कुल्ड, सिगंल सिलिन्डर भीभीए इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिन सेग्मेन्ट कै सर्वाधिक पावरफुल इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले १० हजार आरपीएममा १९.३ पीएस पावर तथा ६ हजार आरपीएममा २० एनएम टर्क जनेरेट गर्छ । यो मोटरसाइकलमा ६ स्पीडको गियरबक्स रहेको छ । यो मोटरसाइकलको मूल्य ४ लाख ५४ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
३. एफजेड २५/फेजर २५
२५० सीसी सेग्मेन्टमा नेपालमा यामाहाको एफजेड सिरिजमा २ मोडलका मोटरसाइकल बिक्री भइरहेको छ । एफजेड २५ र एफजेड फेजर दुई मोडलमा यो मोटरसाइकल उपलब्ध रहेको छ । यी दुबै मोटरसाइकलमा समान २४९ सीसी सिगंल सिलिन्डर, एफआई इन्जिन रहेको छ । एफजेड २५ को मूल्य ४ लाख २९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै फेजर २५को मूल्य ४ लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
४. एफजेड भी २, एफजेडएस भी२, एफजेड भी ३
नेपाली बजारमा यामाहाको सबैभन्दा लोकप्रिय मोटरसाइकल एफजेड १५० सिरिज रहेको छ । एफजेड १५० सिरिज अन्तर्गत कम्पनीले तीन भेरियन्टका मोटरसाइकल बिक्री गरिरहेको छ । एफजेड भी २, एफजेडएस भी२, एफजेड भी ३ । यी तीन मोटरसाइकलमा समान इन्जिन रहेको छ ।
यसमा १४९ सीसी सिगंल सिलिन्डर एफआई इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ८००० आरपीएममा १३.२ पीएस पावर ६००० तथा १२.८ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यो इन्जिनमा ५ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ । एफजेड भी २ को मूल्य २ लाख ७५ हजार ९०० रुपैया, एफजेडएस भी२ को २ लाख ९९ हजार ९ सय र एफजेड भी ३ को मूल्य ३ लाख १९ हजार ९ सय रहेको छ ।
५. एसजेड आरआर
यो मोटरसाइकलमा १४९ सीसी सिगंल सिलिन्डर कार्बुरेटर इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ७५०० आरपीएममा १२.१ पीएस पावर तथा ६००० आरपीएममा १२.८ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यो इन्जिनमा ५ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ । यसको मूल्य २ लाख ३५ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
यामाहा सलुटोमा १२५ सीसी सिगंल सिलिण्डर इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ७००० आरपीएममा ८.३ पीएस पावर तथा ४५०० आरपीएममा १०.१ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यसमा ४ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ । यसको मूल्य २ लाख ११ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
अफारोड मोटरसाइकल एक्सटीजेड १२५ मा १२४ सीसी सिगंल सिलिन्डर कार्वुरेटर इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ५५०० आरपीएममा ९.९ एनएम टर्क तथा ७५०० आरपीएममा १०.२ पीएस पावर जेनेरेट गर्छ । यो इन्जिनमा ५ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ । यसको मूल्य ३ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
८. एमटी १५
यामाहा एमटी-१५ मा आर-१५ भी३ कै समान इन्जिन रहेको छ । यामाहा एमटी-१५ मा १५५ सीसी लिक्विड कुल्ड, सिगंल सिलिन्डर भीभीए इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिले १० हजार आरपीएममा १९.३ पीएस पावर तथा ६ हजार आरपीएममा २० एनएम टर्क जनेरेट गर्छ । यो मोटरसाइकलमा ६ स्पीडको गियरबक्स रहेको छ । यो मोटरसइकलको मूल्य ४ लाख २९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।